बर्दगोरिया ५ मा ६२ लाखको सडक ६२ दिन नपुग्दै उप्कियो, कामचोर कम्पनीलाई दुई करोडको योजना ! – Himalitimes
बर्दगोरिया ५ मा ६२ लाखको सडक ६२ दिन नपुग्दै उप्कियो, कामचोर कम्पनीलाई दुई करोडको योजना !
२०७८ जेष्ठ २६ १७:५९ मा प्रकाशित
बौनियाँ,कैलाली । ६२ लाखमा बनेको सडक ६२ दिन पनि चलेन भन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ तर यो सत्य कुरा हो । कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकामा यस्तै भएको छ ।
पालिकाको वडा नम्बर ५ मा महिना दिन नपुग्दै कालोपत्रे उप्किएको छ । करिब ६२ लाख ५६ हजार ९ सय रुपैयाँको लागतमा बनेको कालोपत्रे महिना दिन नपुग्दै उप्किएपछि स्थानीय चकित परेका छ्न भने सोही सडकमा आवातजावत गर्ने पनि दङ्ग परेका छ्न । लाखौको लागतमा बनेको योजना महिना दिनमै उप्किएपछि सरकारी दाम मिलिजुली खाम भन्ने चलखेल भयोकी भन्ने आसङ्का पनि स्थानीयले गरेका छ्न ।
निर्माण भएको १ हजार २ सय ३५ मिटर सडक मध्ये करिब ३ सय मिटर कालोपत्रेमा समस्या देखिएको पालिकाको प्राबिधिक टोलीको भनाई छ । सडकको बेस निर्माणमा कमसल कच्चा पदार्थ बढी प्रयोग गरेको तथा रोलरको कम प्रयोग गरेका कारण समस्या देखिएको पालिकाका इन्जिनियर नवीन कुमार सिंहले बताउनु भयो । उहाँले सुरु देखिनै हामीले निर्माण कम्पनीलाई बेसको मेट्रियल राम्रो ल्याउन भनेका थियौ उहाँले माटो मिसिएको ल्याउनु भएको थियो ,इन्जिनियर सिंहले भन्नु भयो…, अव सडकको गुणस्तर सुधारका लागि पुनः बेसमा रोलर लगाएर काम गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
यति बेला सो सडकको किनार अर्थात् छेउबाट कालोपत्रे भत्किँदै र उप्किँदै जान थालेको छ । निर्माण कम्पनीले गुणस्तरहीन काम गरेको भन्दै स्थानीयहरू समेत विरोध गर्न थालेका छन् ।
यता निर्माण ठेक्का पाएको बस्नेत विल्डर्स कन्चनपुरका सञ्चालक नरेन्द्र बस्नेतले भने कमसल काम नगरेको बरु मापदण्ड भन्दा बढी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरेको दाबी गर्छ्न । स्थानीय सरकार तथा स्थानीयबासीहरुले काम गर्ने सहज वातावरण सृजना नगर्दा पनि समस्या आएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।
मापदण्ड भित्रको अधिकांश क्षेत्रमा राम्रो काम भएको भएपनि आफू बाहिर हुँदा कामदारहरूको लापरबाहीका कारण केही क्षेत्रमा समस्या देखिएको र निरन्तर सुधार गर्दै आएको भन्दै सञ्चालक बस्नेतले थप समस्या देखिएको ठाउँमा पुन सुधारगर्ने बताए ।
यता कामचोर र कमसल कामगर्ने सोही निर्माण कम्पनीले लाखौको योजना ठेक्कामा पाएको छ । उक्त निमार्ण कम्पनीले वडा नम्बर १ स्थित बास्कोटीमा ५६ लाख २ हजार ८ सय रुपैयाँको लागतमा १ हजार ५० मिटर र वडा नम्बर ४ को मुडा बजार–तल्ला पानी सडक खण्ड ७६ लाख ६५ हजार ४ सय रुपैयाँको लागतमा ४ सय ५५ मिटर सडक कालोपत्रे सहित एक रिटेलिङ वाल समेत निर्माण गर्ने भनि सम्झौता गरेको छ ।
पालिकाको सबै अर्थात् २ हजार ७ सय ४० मिटर सडक कालोपत्रे गर्न जम्मा ३ करोड ३७ लाख २ हजार रुपैयाँको लागत स्टिमेट भए पनि बस्नेत विल्डर्स कन्चनपुरले भने १ करोड ९५ लाख २५ हजार ३ सय रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।
निर्माणको जिम्मा पाएको बस्नेत विल्डर्सले वडा नम्बर ५ मा सडक कालोपत्रे गरिसकेको छ । यस्तै बास्कोटीमा काम जारी छ भने मुडा बजार तल्ला पानी सडक खण्ड कालोपत्रेको तयारी भइरहेको छ । वडा नम्बर ५ मा काम सम्पन्न भएको महिना दिन नपुग्दै कालोपत्रे उप्किन थालेको छ । निर्माण कम्पनीले मापदण्ड पुरा गरेको भए पनि गुणस्तरीय काम भने नगरेको आरोप लागेको छ ।
कतिपयले ठेक्का प्रक्रियाको प्रभावकारी नहुँदा पनि यस्तो समस्या आउने बताएको छ । कालोपत्रेको करिब साढे ३ करोड लागत स्टिमेट हुँदा पनि २ करोडमा काम गर्नु पर्ने बाध्यताका कारण पनि आयोजनाहरू गुणस्तर हीन हुने गरेको धेरैको धारणा छ ।
तर पालिकाभित्रका धेरैजसो योजना मापदण्डविपरीत र गुणस्तरीय नभएको थुप्रै योजना देखिन्छ्न । स्थानीयका अनुसार मापदण्ड विपरीत बनेका योजनामा समेत चलखेल र पहुँचमा पास गर्ने गरेको बुझिएको छ । जसमा आरसीसी रोड मुख्य देखिन्छ ।
कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकामा चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा २ हजार ७ सय ४० मिटर सडक कालोपत्रेको हुने भएको छ ।
नेपालको पूरानो नक्सा अंकित पुस्तक बिक्री गर्ने प्रकाशक र वितरकलाई कारबाही हुने
कोहलपुर ग्यालरीद्वारा बैजनाथका विपन्न परिवारलाई राहत वितरण